विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले पढ्ने भाषा शिक्षा के हो ?
पृथ्वी बिक्रम चन्द
Language training (भाषा प्रशिक्षण)
अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्सलाई विद्यार्थीको चार प्राथमिक भाषिक क्षमता सुधार गर्न डिजाइन गरिएको हो । बोल्ने, सुन्ने, पढ्ने र लेख्ने चार भाषिक क्षमता सुधार गर्ने पाठ्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी बोध गराउने र बोल्ने क्षमता बढाउने काम गर्छन् । सिक्ने र बोल्ने काम सहज र चुनौतीपूर्ण दुवै छ । यो कोर्स सबैको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो र यसलाई बेसिक र एडभान्सड अंग्रेजी कक्षाका रूपमा लिइने गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली वा IELTS गैर-अंग्रेजीभाषीहरूका लागि अंग्रेजी भाषा प्रवीणताको अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकृत परीक्षण हो । यसलाई संयुक्त रूपमा ब्रिटिश काउन्सिल, IDP, अष्ट्रेलिया र क्याम्ब्रिज अंग्रेजी भाषा मूल्यांकनले व्यवस्थित गरेको छ । जीवनका विभिन्न चरणहरूका लागि उपयोगी यो मूल्यांकन प्रणाली तपाईंको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने योजना होस् या अंग्रेजीभाषी देशहरूमा तपाईंको अध्यागमन योजनाका लागि होस् उत्तिकै आवश्यक रहेको छ ।
विदेशी भाषाका रूपमा अंग्रेजीको परीक्षण वा TOEFL अंग्रेजी भाषा बोल्ने विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुन चाहने विदेशीभाषीहरूको अंग्रेजी भाषा क्षमता नाप्नको लागि प्रयोग हुने परीक्षा हो । अंग्रेजीभाषी संस्थाहरूले यो परीक्षा प्रणाली अपनाएका हुन्छन् । यो परीक्षणमा अंग्रेजी बोल्ने क्षमता को परीक्षण हुन्छ । यो अत्यन्तै सुविधाजनक, सजिलो र पहुँचयोग्य छ ।
PTE-A को Pearson परीक्षण एक कम्प्युटर आधारित अंग्रेजी भाषा परीक्षण हो । यो परीक्षण विदेशमा पढ्न चाहने तर अंग्रेजी भाषा बोल्न नसक्नेहरूका लागि गरिन्छ । यो परीक्षणको मूल्यांकन कम्प्युटरले गर्छ । परीक्षार्थीहरूलाई तत्काल नतिजा दिन यो परीक्षणको प्रयोग गरिन्छ । यो टेस्टका लागि जुनसुकै समय पनि उपलब्ध हुन सक्छ ।
SAT त्यस्तो परीक्षण हो जुन संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित कलेजमा भर्ना हुनका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ । SAT का दुई मुख्य भागहरू हुन्छन् । पहिलो पढाइ/लेखाइ र दोस्रो गणित परीक्षण । यी दुई भागमध्ये प्रत्येकको पूर्णांक ८ सय हुन्छ । प्राप्तांकको कूल योग प्राप्त गर्न दुवै भागको गणना गरिन्छ । यसमा एउटा निबन्ध वैकल्पिक हुन्छ र समग्र प्राप्तांकमा जोडिदैन । छात्रवृत्ति र स्नातक पाठ्यक्रमहरूको लागि यो परीक्षणले प्रवेश निर्धारण गर्दछ ।
GRE भनेको स्नातक अभिलेख परीक्षा हो । यसलाई ETS (शैक्षिक परीक्षण सेवाहरू) द्वारा आयोजित एक मानकीकृत परीक्षण भन्न सकिन्छ । ETS GRE स्कोर मास्टर डिग्री कार्यक्रमका लागि शीर्ष स्नातक स्तर स्कूलहरूद्वारा स्वीकार गरिन्छ । यो स्नातक कार्यक्रममा जान चाहनेहरूका लागि र छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक छ । यो परीक्षणका तीन वटा सेक्सनहरू हुन्छन् । पहिलो मौखिक तर्क, दोस्रो मात्रात्मक तर्क र तेस्रो विश्लेषणात्मक लेखन ।
ग्रेजुएट म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट (GMAT)लाई एक कम्प्यूटरबाट अनुकूलन परीक्षण (CAT) मार्फत मूल्यांकन गरिन्छ । यसको अभिप्राय भनेको विश्लेषणात्मक लेखनको मूल्यांकन गर्नु हो । एमबीए जस्तै व्यवस्थापनको स्नातक कार्यक्रममा प्रवेश गर्न मात्रात्मक, मौखिक, पढ्ने क्षमताको मापन गर्नु यसको विशेषता हो ।
लेखक मार्क एजुकेशन फाउन्डेन्सका कार्यकारी निर्देशक हुन ।
६ बैशाख, काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम उच्च बन्दै गएपछि सरकारले…
टियूद्धारा मौका परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना जारी
६ बैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले…
अल मतरुसी सँगै ६५ जना महिलाहरुले अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने
जागिरको खोजीमा हुनुन्छ ? समता घरेलु लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी
इतिहासमा आज : महान बैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनको निधन
सि.स. ६२ अधिकृत क्याडेट पदको शुक्रबार लिइएको शारीरिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक